खुमन अधिकारीको तीज गीत ‘थाहा छैन - कोरोना लाछैन ’ » Gurkha Radio- गोर्खा रेडियोGurkha Radio- गोर्खा रेडियो
खुमन अधिकारीको तीज गीत ‘थाहा छैन – कोरोना लाछैन ’
Gurkha Radio Desk / १० श्रावण २०७७, शनिबार १२:४० प्रकाशीत
लन्डन । हिन्दू नारीहरुको महान पर्व तीज नजिकिंदै गर्दा नेपालमा तीजको बजार पनि तात्तिदै गएको छ । कोरोनाको कहरले गर्दा विगतका वर्षमा जस्तै महिनौं अगाडीदेखि तीजको चहलपहल नदेखिए पनि पछिल्लो समयमा बजारमा प्रशस्त तीजका गीतहरु आउन थालेका छन् ।
लोक गायन क्षेत्रमा नेपाली सांगीतिक बजारमा अग्रणी भूमिका निभाउंदै आएका गायक खुमन अधिकारीले योवर्ष पनि दर्जन भन्दा बढी तीजका गीतहरु गाइसकेका छन् । कोरोनासंग सम्बन्धित उनको पछिल्लो ‘थाहा छैन (कोरोना लाछैन)’ बोलको तीज गीत सार्वजनिक भएको छ । यस गीतमा गायक खुमन अधिकारीलाई अर्की चर्चित गायिका सम्झना भण्डारीले साथ् दिएकी छन् ।
कोरोनाका कारण त्रसित मनलाई सान्त्वना दिंदै ‘नडराउ न कोरोना लाछैन’ जस्ता शब्दहरुको सृजना प्रकाश पराजुलीले गरेका हुन् । यस गीतमा लय सृजना तथा भिडियो निर्देशन गायक खुमन अधिकारीको रहेको छ भने अभिनय पनि स्वयंले गरेका छन् ।
उनलाई अभिनयमा लोमश शर्मा, धुर्ब हिमाली, अर्जुन गौतम, बबिन ठकुरी, दिपाषा बीसी र दिव्यानी ओलीले साथ् दिएका छन् । स्मृति तिमिल्सिनाको ‘गुरुआमाको निर्देशन तथा छायांकन रहेको यस भिडियोको सम्पादन करण चैसिरले गरेका हुन् । उक्त भिडियोलाई खुमन अधिकारीको आफ्नै युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक अग्रिएको हो ।
थाहा छैन (कोरोना लाछैन )भिडियो हेर्नुहोस
आज महाअष्टमी आठौँ महागौरीको विधिपूर्वक पूजाआराधना
४. नेपालमा ४ हजार ४९९ संक्रमित, दुई हजार ८६४ निको भए
५. आज विजयादशमी घर घरमा टिका लगाउने तयारी